(ရှားဘုရင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ဘုရင် အဗူ ဇဖား ဆီရာဂျာဒင် မိုဟာမက် ဗဟာဒူး ရှား ဇဖား ခေါ် His Royal Highness Abu Zafar Sirajuddin Muhammad Bahadur Shah Zafar (အူရဒူ: ابو ظفر سِراجُ الْدین محمد بُہادر شاہ ظفر‎), သည် ( ဗဟာဒူးရှား Bahadur Shah သို့ ဗဟာဒူးရှား၂ Bahadur Shah II ) (အူရဒူ: بہادر شاہ دوم‎) ဟု လည်း လူသိများသော အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ၏ တီမူရစ် မင်းဆက် မှ နောက်ဆုံး မဂို ဘုရင် ဖြစ်သည်။
ဗဟာဒူး ရှား ဇဗား သည် ဒေလီ ရှိ ခံတပ်နီ နန်းတော် အပြင်မျှသာ အာဏာသက်ရောက်သော မဂို အင်ပါယာ ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ တို့ က ၁၉ ရာစု အိန္ဒိယ ၏ နိုင်ငံရေး နှင့် စစ်ရေး ကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက် ခဲ့ကြသည်။ ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယ နယ်ပယ် ၏ အပြင်ဘက်တွင်မူ တိုင်းနိုင်ငံငယ်များ အုပ်ချုပ်ခံနယ် များ အဖြစ် အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာ ကွဲထွက်ခဲ့သည်။ ဒေလီရှိ ဘုရင်ကြီး ကို ဗြိတိသျှ တို့ က အချို့ အခွန်ကောက်ခံခွင့်၊ စစ်တပ်အနည်းငယ် ထားရှိခွင့် စသော အခွင့်အရေး တချို့နှင့် လေးစားမှု အနည်းငယ် ပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုသို့ စစ်တပ်ထားရှိခွင့် သည် အိန္ဒိယ ကို မည်သို့မျှ စိုးမိုးနိုင်စွမ်း မရှိစေရန် လည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဗဟာဒူးရှား ၂ ကိုယ်တိုင် ကလည်း မည်သည့် တိုင်းရေးပြည်ရာ ကို လည်းကောင်း၊ တော်ဝင် ဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက် ကို လည်းကောင်း စိတ်ဝင်စားမှု မရှိခဲ့ပေ။ စီပွိုင်း တပ်တွင်းပုန်ကန်မှု အပြီးတွင်မှု ဗြိတိသျှ တို့ က ဘုရင်အား ဒေလီမှ ပြည်ပသို့ ပို့ဆောင်လိုက်သည်။ ထိုအကြောင်း ကို ဝီလျှံ ဒယ်ရမ်ပယ် ရေးသော နောက်ဆုံးမဂိုဘုရင် အကြောင်း တွင် သေချာဖော်ပြခဲ့သည်။
ဗဟာဒူး ရှား ဇဗား ကို အူရဒူ ကဗျာဆရာ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကဇယ်(ghazal) ဟု ခေါ်သော အူရဒူ ကဗျာများ အမြောက်အများ ကို ရေးသားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ လက်ရာအချို့သည် ၁၈၅၇ အိန္ဒိယပုန်ကန်မှု အတွင်း ပျက်စီးပျောက်ဆုံး သွားသော်လည်း အများစုမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ အများစု ကို နောက်ပိုင်း တွင် ကူလီယက် အီ ဇဗား အဖြစ် စုပေါင်း၍ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်း၏နန်းတော် သည် ဂါလစ်၊ နာဝပ် မီဇာ ခန်း ဒါ့၊ မူနင် နှင့် ဇက် တို့ကဲ့သို့သော အူရဒူ ကဗျာအကျော်အမော် များ စုဝေးရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
↑ [Vinayak Damodar] (1909, 10 May). The Indian War of Independence –1857 The Indian War of Independence - 1857။
↑ The Dargah of Bahadur Shah Zafar in Rangoon.
↑ Nawab Zeenat Mahal
↑ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၃၃။
↑ Farooqi၊ Abdullah။ Bahadur Shah Zafar Ka Afsanae Gam။ Farooqi Book Depot။ 2007-07-22 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇဖား_ရှား_ဘုရင်&oldid=409507" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၄:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။